Google zutara Cronologics iji mee ka ndi mmadu weghachite Android Akụkọ akụrụngwa
Afọ a abụbeghị afọ gam akporo Wear. Oge egburu oge site na mwepụta nke gam akporo Wear 2.0, nke ike nke smartwatches dabere na Android na-agbasawanye nke ukwuu, na-ejide Apple Watch, abụwo ihe siri ike nye ndị nrụpụta, bụ ndị kpebiri ịghara ịmalite ụdị ọ bụla ọhụụ ahịa na ọkara nke abụọ nke afọ. Na mgbakwunye, Motorola ahụghị ahịa a na-atọ ụtọ ma izu ole na ole gara aga kwupụtara na ọ na-agbahapụ ya ruo mgbe ndị ọrụ gosipụtara mmasị na ikpo okwu a. Na mgbakwunye, Samsung na-arịwanye elu ịkụ nzọ na Tizen, sistemụ arụmọrụ maka smartwatches nke na-enye arụmọrụ ka elu site na iji ọkụ ọkụ.
Iji gbalịa ịkwụsịlata nwayọ na gam akporo Wear n'afọ a, ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka Mountain View ka kwupụtara nzụta Cronologics, ụlọ ọrụ nke ndị ọrụ Google mbụ hiwere na 2014 nakwa na ọ lekwasịrị anya na ịmalite ngwa maka wearables. Ebumnuche nke ịzụta a abụghị naanị karịa ịnwa imeziwanye ikike nke gam akporo wear na-enye ugbu a, iji nọgide na-adọta mmasị nke ndị nrụpụta na-enweghị ike ịgafe Samsung's Tizen.
N'ịgbaso ọkwa ahụ, nke e mere site na blọgụ nke ụlọ ọrụ ahụ, Google kwuru na ndị otu Cronologics niile na-elekwasị anya na mmepe nke ụdị ọzọ nke gam akporo Wear, 2.0, mmelite nke ndị ọrụ na-atụ anya ya mana maka nsogbu dị na mmepe ya. egbu oge, igbu oge na Google ejiriwo tinye ọrụ ọhụrụs, na mgbakwunye na nke ndị ewepụtara na Google I / O ikpeazụ na Mee. N'oge a anyị amaghị ego nke Google kwụrụ, mana ihe niile na-egosi nke ahụ ụlọ ọrụ ahụ ga-ahụ ụzọ ya mechie na ndị otu niile na-arụ ọrụ ruo ugbu a ga-abụ akụkụ nke nkebi nke Android Wear.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Google zụtara Cronologics iji mee ka Wear gam akporo dịghachi
Popcorn Oge, malware nke na-amanye gị ịchụ ndị enyi gị n'àjà